जनतालाई सधैं बाडुल्की लागिरहने भयाे अाेली सरकार-Nagarikaawaj.com
जनतालाई सधैं बाडुल्की लागिरहने भयाे अाेली सरकार
– बिजय ज्ञवाली ।
“जसले मलाई भोट दिएर जिताउनुभो, उहाँहरुको अमूल्य भोटलाई म खेरा जान दिनेछैन, तर जसले मलाई भोट दिनुभएन उहाँहरुलाई बाडुल्की लागीरहनेछ।” तपाईंलाई पनि अवश्य याद छ होला, प्रधानमन्त्री भैसकेपछि के.पी. ओलीले बोलेको यो शव्दलाई। संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेसंगै निकै हौशिएका प्रम ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भैसकेसंगै मूलूकले पनि यौटा ठूलो अपेक्षा उनिवाट गरेको थियो। तीखो व्यंग, सपाट जवाफ र तुरुन्त प्रतिक्रिया फर्काईहाल्ने उनको आनीबानीसंगै देश र जनताले पनि उस्तै गतिमा बर्तमान संकटको सहज निकाशको अपेक्षा गरेका थिए, तर उहीँ यौटा उखान झैं, ” पहाड फोरेर मुसो मात्र हात” सिद्ध सावित हुँदैछ बर्तमान सरकार पनि ।
नेपाली राजनितिको इतिहासमा यसपटक यौटा यस्तो दूर्लभ खालको गठवन्धनले सरकारमा साझेदार गरिराखेको छ, सायद यस्तो गठवन्धको परिकल्पना गर्न अब हामिले कयौं बर्ष कुर्नुपर्नेछ। कहिल्ल्यै मिलेर बस्न नसक्ने भनेर चित्रित कम्युनिस्टहरुको आचरणलाई संयोगमा ढाल्दै नेपाली प्रशाषनिक संयन्त्रमा यसपाली बामपन्थीहरुको दह्रो उपस्थिति रहिआएको छ। यो यौटा संयोगमात्र नभएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सिर्जित परिणामको देन पनि हो।
लोकतान्त्रिक शक्तिको यौटा कित्ता र बामपन्थी शक्तिको अर्को कित्ताको सपाट तस्विरमाझ सम्पन्न संविधान लेखनसंगै फेरिएको मुलुकको राजनितिको अर्कै पाटोमा वामपन्थी गठजोड हुनपुगेको हो। सधैको चलाख्यैं गर्ने बानी परेको भारतको चाहनामा अवरोध पनि यसै गठवन्धनले गरेको हो, भने यसपाली संविधानलेखनलाई मूर्त रुप दिने काम गरेको जस पनि यसै गठवन्धनलाई जानेछ। भलै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा संविधान लेखन कार्य सम्पन्न भएतापनि संविधान लेखनपूर्व तीन दलबिच भएको सम्झौता अनुरुप बिचमा कांग्रेसले त्यो सम्झौता र सहमतीलाई लत्याएर सहकार्यको राजनितिलाई तोड्न पुगेको हुनाले संविधान लेखनको जस पनि बिस्तारै आफ्नै हातवाट गुमाउँदै गएको छ।
`स्ट्रङ्गल अपोजिशन´ अर्थात बलियो प्रतिपक्षी हरेक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अपेक्षा गरिएकै हुन्छ। बर्तमान सत्तासमिकरणमा पनि हामिसंग यौटा बलियो प्रतिपक्ष त छ, तर किंकर्तव्यविमूढ मात्रको छ। प्रतिपक्षको धर्म, काम, कर्तव्य र अधिकारका बिषयमा यो प्रतिपक्षले कुनै सोंचनी बनाएको देखिंदैन। अझै आर्को खतरनाक उखान छ,” एकपटक मान्छेको रगत खान पल्किएको बाघले हत्तपत्त अन्य जनावरको सिकार गर्न चाहन्न।” यसको सोझो अर्थ नेपालका राजनैतिक दलहरुमा लागू हुन जान्छ। पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेका नेताहरुलाई प्रतिपक्षमा बस्दाको पीडा र मान्छेको खुन चाखिसकेको बाघको कथा यौटै हो। अँघाडी पछाडी साईरन बजाउँदै, चर्को सुरक्षा घेराभित्र अनेकनको सल्यूट र माननीयको उपमासंगै ठाउँ ठाउँमा फुलका माला, तालीका गड्गडाहट, सेमिनार, गोष्ठी, बिदेश भ्रमण देखि लिएर करोडौं भ्रष्टाचार सम्म आफ्नै हात डुवाउन बानी परेकाहरुलाई सत्ताबाहिरको उराठ जमिन सायद उदाङो नै लाग्दो हो।
संविधान निर्माणको जस पाएको कांग्रेसले यसपाली पूर्व सहमतिअनुरुप कि त सरकार गठनमा सहयोग गर्नुपर्थ्यो र राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर बिद्ध्मान समस्या समाधानमा मतैक्यता जाहेर गर्नुपर्थ्यो, होईन सरकारमा सहभागी नभएतापनि यौटा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस उँभिनु जरुरी थियो जुन हुन सकेन। यसपाली राष्ट्रिय संकट समाधानमा दलहरुबिचमा एकमत र एकजुट हुनु आवश्यक थियो, तर दूर्भाग्य त्यसो हुन सकिराखेको छैन। पूर्वसहमतिलाई अक्षरस पालना गरेको भए संविधाननिर्माणको जस काङ्ग्रेसको भागमा पर्नेथियो, जसमा कांग्रेसको आगामी यात्राहरु अझ सहज हुनेथियो र बाँकी संविधान कार्वान्ययनको जिम्मा बर्तमान सरकारलाई छाडिदिई आफुले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा बसिदिएको भए गणतन्त्र पनि संस्थागत पद्धतिको बाटोतिर लम्किन्थ्यो भने मुलुकले पनि समस्या समाधानमा दलहरुबाट अभिभावक्त्व प्राप्त गर्नेथियो। तर बिडम्वना त यस्तो छ कि जारी भैसकेको संविधानको अभिभावक्त्व लिईदिने कोहि पनि भइदिएनन, शिशु संविधान त्यत्तिकै अलपत्र छ भने मातृभूमी जर्जर भैसकेको छ।
अझ अर्को उखान छ, ” केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मट्याङ्राको सत्यनाश !” हो, अवश्य पनि अहिलेसम्म सत्तासंचालनको गति यस्तै अवस्थावाट गुज्रीराखेको छ। सरकार र यसका सारथीहरु आज मात्र होईन बिगतदेखी नै अत्यन्त गैरजिम्मेवार तवरवाट प्रस्तुत भैरखेका छन। देशको सर्वोच्च प्रशाषनिक निकाय सिंहदरवारवाट शुरु हुने यो गैरजिम्मेवारिता गाविसस्तरसम्म आईपुग्दासम्म पनि उस्तै प्रकृतिको क्रियाकलाप रहेको पाईन्छ।
भ्रष्टाचार र कालोबजारी अहिलेको प्रमूख चुनौती बनिरखेको बेलामा सरकार भने मूकदर्शक मात्र बनिरहनु अति लज्जाको बिषय हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेशनलको तथ्यांकमा अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि समावेश छ। यस्तोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भनेर स्थापित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको काम कर्तव्य र दायित्व के हो अझ पनि बुझ्न नसकेको जस्तो लाग्दछ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शु-शाषनको निम्ति अख्तियारी पाएको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढिलासूस्ती, गैरजिम्मेवारिपना तथा केटौली व्यवहारले झनै आजित बनाएको मात्र छैन अख्तियारको नियतमाथी समेत प्रश्नचिन्न्ह खडा हुनथालेका छन। मानौं यस्तो लाग्दछ कि यो देशमा भ्रष्टाचार नै भएको छैन, रकम हिनामिना भएकै छैन।
प्रशाषनिक संयन्त्रमा दलिय भागवणडाको परिणती हामी वारम्वार भोग्दै आएका छौं। प्रत्येक राजनैतिक दल तथा तिनका भातृसंगठनहरुदेखी लिएर सामान्यस्तरको कार्यकर्तासम्म संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। तर अख्तियार यो लहरो तान्ने हिक्मत गर्न सक्तैन भने दलहरुले शु-शासन तथा पारदर्शिताको कहिल्ल्यै अभ्यास गरेनन। मूलुकको लागि दूर्भाग्य त अझ यो पो छ कि भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, तस्कर, गुण्डा तथा माफियाहरुलाई उल्टै दलहरुबाट पश्रय हुँदै आईरहेको छ।
योभन्दा अझ डरलाग्दो तस्विर त यो तीन महिनाको अवधीमा मौलाएको कालोबजारींको यो बिकराल रुप सामुन्ने आएको छ। लगभग लगभग सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गैसकेको नाकावन्दीसंगैको कालोबजारीले देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ। कमजोर सरकारी संयत्र एवं स्वयं सरकारी उदाशिनताले गर्दा आज सरकारको १५ अर्वभन्दा बढी राजस्व गुमिसकेको तथ्यांक बाहिर आईसकेको छ। सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यो तीन महिनाको अवधिमा अवैध रूपमा ल्याइएको इन्धन बिक्री गरेर सबै खर्च कटाई माफियाले १४ अर्ब ६९ करोड ७४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन भने चोर बाटोमार्फत मौलाउँदै गएको इन्धनको कालोबजारी र तस्करीका कारण राज्यले पेट्रोल र डिजेलतर्फ मात्रै तीन महिनाको अवधिमा दुई अर्ब २८ करोड ६९ लाख बराबरको राजस्व गुमाएको छ। तस्करहरुको यतिविघ्न सकृयता र यतापट्टी सरकारी उदाशिनता कतै सरकारी अधिकारी र तस्करविचको मिलेमतो त होईन? प्रश्न गम्भीर छ।
भूकम्पपिडितलाई राहत तथा जाडोमा न्यानो कपडा उपलव्ध अनि वासस्थानको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने सरकारले उल्टै जनतालाई आहत दिंदैछ। बर्सेनि ३अर्वभन्दा बढी राज्यलाई भार पर्नेगरी सरकारले उल्टै मन्त्रालय फुटाउ र सत्ता टिकाईराख को नीति अवलम्वन गरेको छ। शुशाषन तथा प्रशासनिक सुधार आयोगले सिफारिस गरेको प्रशाषनिक सुधार प्रतिवेदनलाई पालना गर्नुपर्ने दायित्व भूलेर सरकारले उल्टै `मोनोपोली´ अर्थात मनपरीतन्त्रलाई पश्रय दिईराखेको छ। अहिलेसम्म चिसोले कठ्याङ्रीएर ७ भूकम्पपिडितको मृत्यु भैसकेको छ भने कयौं बालवालिका नाना, छाना र खानाको अभावमा यो चिसोमा विचल्लीमा परेका छन भने सरकारले भूकम्पपिडितवाट कम्बलको कुनै माग भैनआएको भन्दै पुर्वान्चल भन्सार कार्यालयमा थन्किएर रहेका बंगलादेश सरकारबाट सहयोगस्वरुप उपलव्ध ५ ट्रक कम्बल त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छ।
अझै अर्को बिश्वचर्चित उखान छ, “रोम जल्दै थियो, निरो बाँसुरी बजाउंदै थियो।” मूलूक दिनप्रतिदिन अंध्यारोमा भासिंदै गैराखेको छ। ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल देखि लिएर औषधिसम्मको चरम अभाव यसैबेला चुलिएको छ। एकबर्षमा लोडसेडिङ अन्त गरेरै छाड्ने बारम्बार उद्घोस गरेका प्रम ओलीको बोलीको लवज अब एकमहिना नहुँदै फेरिन थालेको छ। राज्य रामराज्यमा परिणत नभएर रामभरोसामा चल्ने गरेको छ। दैनिक लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक भैरहँदा सरकार भने पूर्व विशिष्ठलाई सेवा सूविधाको नाममा अर्वौं रुपिंयाको राज्यलाई भार बोकाउनमा उद्धत छ। मन्त्रालय फुटाएर र पूर्व विशिष्ठलाई सेवा सुविधाका नाममा खर्च गरिने अर्वौं रकमले देशमा बर्सेनि ४०-५० मेगावाट बिजुली थप्न सकिन्छ भने दूर्गम क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका भौतिक पूर्वाधारले मुलुकको कायापलट गर्न सकिन्छ। यतातर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्नु र खाली राज्यलाई ब्ययभार मात्र थोपर्न उद्धत रहनु सरकार साँढेराज्य भन्दा कम्ता हैशियतको देखिंदैन जसरी छाडिएको सडकको साँढेको मनपरी चल्दछ।
उखाने काका र बाडुल्की सरकारको नामले चर्चित बर्तमान सरकारले अर्को महत्वपूर्ण अवसर पनि अब बिस्तारै गुमाउँदै गएको छ। त्यो हो, वामपन्थी गठजोडले गर्दा जुन अकिकती राष्ट्रवादीको संज्ञा पाएको थियो, त्यो भारतको नाकावन्दीसंगै धरमराएर गएको छ। हाम्रो अनुमान थियो यसपालीको बामपंथी गठजोडको सरकारले पनि गर्न सकेन भने आगामी दिनहरुमा कुनैपनी सरकारले राष्ट्रहितमा अग्रगामी कदम चाल्न सक्नेछैनन। तर बामपन्थीको बाहुल्य रहेको बेला पनि सरकारबाट अपेक्षित काम हुन सकेनन। भारतिय नाकावन्दीको विकल्पमा जुन कदम अति सक्रियताका साथ चालिनुपर्ने थियो, त्यस्तो कतै भएन। बरु कतिपय कर्मचारीसामु सरकार निरीह बनिरह्यो।
न मधेस आन्दोलनलाई बेलैमा संवोधन गर्न सक्यो न नै महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, अराजकता, ढिलासुस्ती लगायतका यावत समाजका बिकृतहरु नियन्त्रण गर्न नै सक्यो। इतिहासमा यत्तिको वामपन्थी गठजोड मिलेको बेला यसवेला भारतलाई सहजै अफ्ठ्यारोमा पार्न सकिनेथियो। भारतको नाकावन्दीको विषय र उत्पन्न हुन लागेको मानविय संकटको बारेमा बेलैमा दह्रो रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आवाज उठाएको भए नेपालले अन्तर्राष्ट्रियजगतको पहलमा न्याय पनि पाउने थियो भने भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउनुपर्ने पारवहनसंवन्धी अधिकार, समुद्रसम्मको सहज पहुँच, १९५० को सुगौली सन्धी, नेपाल भारतबिचको पारवहन सम्झौता, भियना सम्झौता, साथै सार्क राष्ट्रविच उल्लेखित सहज आवजजावतको नियमहरुलाई मज्जाले उपयोग गर्न सक्तथ्यो। तर यसो गर्न बर्तमान सरकारले सकेन। यसो गर्न नसक्नुको मूख्य कारण भनेको एक त अति फितलो कुटनिती र दोस्रो इच्छाशक्तिको अभाव देखिन आउँछ। सायद बर्तमान सरकारको नाडी छामेरै दिल्लीले नाकावन्दी लगाएको त होला नि होईन र? त्यसैले त नेपाली समाजमा अर्को खुवै रोचक उखान प्रचलनमा छ,” हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात।” कसो त ओली सरकार?